Ewuradze Edzidzi​—Ebɛnadze Ntsi Na Ɔkwan A Jehovah Adasefo Fa Do Dzi No Yɛ Soronko Fi Ɔsom Afofor Dze Ho?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bicol Bislama Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Croatian Czech Danish Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Faroese Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Irish Mmum Kasa Isoko Italian Japanese Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korea Mmum Kasa Korean Lingala Lithuanian Low German Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mfantse Mingrelian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sunda Swahili Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Totonac Turkish Turkmen Tzeltal Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ebɛnadze Ntsi Na Ɔkwan A Jehovah Adasefo Fa Do Dzi Ewuradze Edzidzi No Yɛ Soronko Fi Ɔsom Afofor Dze Ho?
Sɛ yeridzi “Ewuradze edzidzi” a binom frɛ no Ewuradze ewimbir edziban anaa Jesus no wu ho Nkaadzi no a, yedzi dza Bible no kyerɛkyerɛ no do dzendzenndzen. (1 Corinthfo 11:20) Dza ɔnye iyi bɔ ebira no, ɔsom afofor pii hɔn gyedzi nye ndzeyɛɛ ahorow a ɔfa dɛm Ewuradze edzidzi yi ho no nngyina Bible no do.
Tsirmpɔw ntsi a yedzi Ewuradze edzidzi no nye dɛ yɛdze bɛkaa Jesus, na yaakyerɛ enyisɔ ama afɔr a ɔbɔe maa hɛn no. (Matthew 20:28; 1 Corinthfo 11:24) Iyi nnyɛ ɔsom mu adzeyɛ bi a ɔdze adom brɛ obi anaa ɔma wɔdze obi no bɔn kyɛ no. * Bible no kyerɛkyerɛ dɛ, nnyɛ nyamesom mu amandze bi na ɔbɛma wɔdze hɛn bɔn akyɛ hɛn, na mbom ɔnam gyedzi a yebenya wɔ Jesus mu nkotsẽe do.​—Romefo 3:​25; 1 John 2:​1, 2.
Mpɛn dodow ahen?
Jesus hyɛɛ n’esuafo no dɛ wondzi Ewuradze edzidzi no, naaso wɔannkã mpɛn dodow pɔtsẽe a ɔsɛ dɛ wodzi no. (Luke 22:19) Binom susũ dɛ ɔsɛ dɛ yedzi no bosoom biara, afofor so dzi no dapɛn biara, da biara, mpɛn pii wɔ da biara mu, anaa mpɛn dodow biara a wɔtse nkã dɛ oye biara. * Naaso, ɔsɛ dɛ yesusũ nsɛm a odzidzi do yi ho.
Jesus dze Ewuradze edzidzi no sii hɔ wɔ da a nna wodzi Apaho Afahyɛ no, na ekyir yi owui dɛm da no ara. (Matthew 26:​1, 2) Nna iyi nnyɛ asɛm a ɔnye asɛm ehyia kɛkɛ. Kyerɛwnsɛm no dze Jesus n’afɔrbɔ no toto Apahoguan no ho. (1 Corinthfo 5:​7, 8) Nna wodzi Apaho Afahyɛ no pɛnkor wɔ afe biara mu. (Exodus 12:​1-6; Leviticus 23:5) Ntsi, dɛmara so na Christianfo a nna wodzi kan no dzii Jesus no wu ho Nkaadzi no pɛnkor afe biara, * na Jehovah Adasefo dzi dɛm Bible mu nhwɛdo kor yi ara ekyir.
Da nye ber
Ɔnnyɛ mpɛn dodow a ɔsɛ dɛ yedzi Nkaadzi yi nko na Jesus no nsusudo a ɔdze sii hɔ yi ma yehu, na mbom da nye ber a ɔsɛ dɛ yɛdze dzi so. Ɔdze afedzi yi sii hɔ wɔ aber a ewia akɔtɔ no, wɔ Nisan 14, 33 H.B. (Hɛn Ber yi mu) dɛ mbrɛ Bible kalɛnda no tse. (Matthew 26:18-​20, 26) Yɛkɔ do dzi Nkaadzi yi wɔ dɛm da yi afe biara dze dzi Christianfo a wodzi kan no nhwɛdo ekyir. *
Ɔyɛ nokwar dɛ nna Nisan 14, 33 H.B. no yɛ Fida dze, naaso n’afedzi no botum esi da fofor wɔ dapɛn no mu afe biara. Yɛmmfa ɔkwan a wɔdze ndɛ mber yi mu Jewfo kalɛnda no dzi dwuma no do nnkyerɛ da a Nisan 14 no si wɔ afe biara mu. Mbom no, yɛfa ɔkwan a nna wɔfa do wɔ Jesus aber do no do pɛpɛɛpɛr. *
Paanoo nye wenyin
Aber a Jesus dze afedzi fofor yi risi hɔ no, ɔdze paanoo a mbɔrkaw nnyi mu nye wenyin kɔkɔɔ a wɔdze dzii Apaho afahyɛ no ne nkaa no na ɔdze dzii dwuma. (Matthew 26:26-​28) Yedzi ne nhwɛdo no ekyir, na yɛdze paanoo a adze a ɔkaw anaa biribi fofor biara mmfora mu dzi dwuma. Afei so, yɛdze wenyin kɔkɔɔ krɔngyenn dzi dwuma, na nnyɛ anondze dɔkɔdɔkɔ a wɔdze wenyinaba ayɛ, anaa wenyin a wɔdze adɔkɔdɔkɔdze bi anaa biribi fofor biara afora mu.
Asɔrasɔr binom dze paanoo a wɔdze mbɔrkaw anaa yeast afora mu dzi dwuma, naaso wɔtaa dze mbɔrkaw dzi dwuma wɔ Bible no mu dze gyina hɔ ma bɔn anaa prɔwee. (Luke 12:1; 1 Corinthfo 5:​6-8; Galatiafo 5:​7-9) Ntsi, paanoo a mbɔrkaw anaa adze fofor biara mmfora mu no na ɔfata dɛ wɔdze gyina hɔ ma Jesus ne nyimpadua a bɔn nnyi mu no. (1 Peter 2:​22) Adze fofor so a Bible no mmfoa do nye dɛ wɔdze anondze dɔkɔdɔkɔ a wɔdze wenyinaba a ɔnnkawee ayɛ besi wenyin no ananmu. Asɔr ahorow bi yɛ dɛm osiandɛ wɔbra nsãnom ntsi, naaso iyi nngyina Kyerɛwnsɛm no do.​—1 Timothy 5:​23.
Asɛnkyerɛdze, nnyɛ nyimpadua nye bɔgya ankasa
Paanoo a mbɔrkaw nnyi mu nye wenyin a wɔdze dzi dwuma wɔ Nkaadzi no ase no yɛ asɛnkyerɛdze, anaa biribi a ogyina hɔ ma Christ ne nyimpadua na no bɔgyaa. Iyinom mmfa anwanwakwan do nndan ne nyimpadua na no bɔgyaa dɛ mbrɛ binom susũ no. Na ne nyimpadua na no bɔgyaa biara mmbɔfora paanoo nye wenyin no mu so. Hwɛ Bible mu ngyinado ahorow bi a ɔma yenya dɛm ntseasee yi.
Sɛ Jesus kãa kyerɛɛ n’esuafo dɛ wɔnnom no bɔgyaa a, nkyɛ ɔbɛkyerɛ dɛ nna ɔrekã akyerɛ hɔn dɛ wombu Nyankopɔn mbra a ɔdɛ mma wonndzi bɔgya no do. (Genesis 9:4; Ndwuma 15:28, 29) Naaso iyi runntum nnyɛ yie, osiandɛ Jesus rennkã da dɛ afofor mbu Nyankopɔn mbra a ɔfa mbrɛ bɔgya yɛ krɔnkrɔn no do.​—John 8:​28, 29.
Jesus bɔɔ n’afɔr no “prɛko.” (Hebrewfo 9:​25, 26) Naaso, sɛ paanoo nye wenyin no sesã yɛ ne nyimpadua na no bɔgyaa wɔ Ewuradze edzidzi no ase dze a, ɔnodze nna hɔn a woridzi no resan abɔ afɔr no bio.
Jesus kãe dɛ: “hom nyɛ yi mfa nyɛ me nkaa,” nnyɛ dɛ “mfa me nyɛ afɔrbɔ.”​—1 Corinthfo 11:24.
Hɔn a wɔgye dzi dɛ paanoo no nye wenyin no sesã yɛ Jesus ne nyimpadua na no bɔgyaa ankasa no, dze hɔn nkyerɛkyerɛ no gyina Bible nkyekyɛmu ahorow bi do. Dɛ nhwɛdo no, wɔ Bible nkyerɛase ahorow pii mu no, wɔkã dɛ Jesus kãe faa wenyin no ho dɛ: “iyi nye mo bɔgyaa.” (Matthew 26:28) Naaso, wobotum akyerɛ Jesus ne nsɛm no ase bio dɛ: “Iyi kyerɛ mo bɔgyaa,” “Iyi gyina hɔ ma mo bɔgyaa,” anaa “Iyi yɛ mo bɔgyaa ho asɛnkyerɛdze.” * Dɛ mbrɛ nna Jesus taa yɛ no, nna ɔdze ntotoho na ɔdze rekyerɛkyerɛ.​—Matthew 13:34, 35.
Woananom na wodzi bi?
Sɛ Jehovah Adasefo hyɛ Ewuradze edzidzi no ho fã no a, hɛn mu kumaabi na wodzi paanoo no na wɔnom wenyin no bi. Ebɛnadze ntsi na ɔtse dɛm?
Jesus no bɔgyaa a ohuei gui no dze ahyɛmu “Fofor” sii hɔ, na obesii ahyɛmu a nna ɔda Jehovah Nyankopɔn nye tsetsebermu Israelman no hɔn ntamu no ananmu. (Hebrewfo 8:​10-​13) Hɔn a wɔkã dɛm ahyɛmu fofor no ho na wodzi Nkaadzi paanoo no na wɔnom wenyin no bi. Nnyɛ Christianfo nyina na wodzi bi, na mbom hɔn a Nyankopɔn ‘afrɛ hɔn’ wɔ ɔkwan soronko do no nkotsẽe. (Hebrewfo 9:​15; Luke 22:20) Iyinom nye Christ bedzi adze wɔ sor, na Bible no kã dɛ nyimpa 144,000 pɛr na wonya dɛm ho kwan no.​—Luke 22:28-​30; Nyikyerɛ 5:​9, 10; 14:​1, 3.
Dza ɔnye “oguankuw ketseaba” a wɔafrɛ hɔn ma wɔnye Christ rikedzi adze no bɔ ebira no, hɛn mu fã kɛsenara wɔ enyidado dɛ yɛbɛkã “nyimpadodow kɛse” a wobenya onnyiewiei nkwa wɔ asaase do no ho. (Luke 12:32; Nyikyerɛ 7:​9, 10) Ɔwɔ mu dɛ hɛn a yɛwɔ enyidado dɛ yɛbɛtsena asaase do no nndzi paanoo no na yɛnnom wenyin no bi dze, naaso yɛnye hɔn bɔ mu kyerɛ enyisɔ ma Jesus n’afɔr a ɔbɔe maa hɛn no.​—1 John 2:2.
^ nky. 4 McClintock and Strong’s Cyclopedia, Ɔfã IX, krataafã 212, kã dɛ: “Kasafua sacrament no nnyi NT [Ahyɛmu Fofor] no mu; dɛmara so na Greek kasafua μυστήριον [my·steʹri·on] so wɔmmfa nndzi dwuma mmfa nnkyerɛ enuma anaa Ewuradze edzidzi, anaa enyido adzeyɛ biara.”
^ nky. 6 Bible asekyerɛfo bi dze asɛmfua “mpɛn dodow a” dzi dwuma aber a wɔrekã Ewuradze edzidzi no ho asɛm no, na wɔtaa kyerɛ ase dɛ, ɔno kyerɛ mber dodow a ɔsɛ dɛ wodzi no. Naaso, dɛm asɛmfua a wɔdze dzii dwuma wɔ ha no ne nkyerɛase ankasa nye “mber biara” anaa “aber biara”​—1 Corinthfo 11:25, 26; Good News Translation.
^ nky. 7 Hwɛ The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Ɔfã IV, krataafã 43-​44, nye McClintock and Strong’s Cyclopedia, Ɔfã VIII, krataafã 836.
^ nky. 9 Hwɛ The New Cambridge History of the Bible, Ɔfã 1, krataafã 841.
^ nky. 10 Wɔ ndɛ mber yi mu Jewfo kalɛnda no mu no, aber a nworabahwɛfo no dzi kan hu bosoom fofor no na ɔkyerɛ ber a Nisan no hyɛ ase, naaso nna ɔnntse dɛm wɔ asomafo no aber do. Mbom no, nna Nisan no hyɛ ase aber a wodzi kan hu bosoom no wɔ Jerusalem, aber a nworabahwɛfo no ehu no ekyir bɛyɛ dakor anaa dza ɔbor dɛm no. Dɛm nsosoree yi ntsi na ndɛ, ɔtɔfabi a aber a Jehovah Adasefo dze dzi hɔn Ewuradze edzidzi no yɛ soronko fi ber a Jewfo no dze dzi hɔn Apaho no.
^ nky. 19 Hwɛ A New Translation of the Bible, a James Moffatt kyerɛwee no; The New Testament​—A Translation in the Language of the People, a Charles B. Williams kyerɛwee no; nye The Original New Testament, a Hugh J. Schonfield kyerɛwee no.
Fa mona Fa mona Ebɛnadze Ntsi Na Ɔkwan A Jehovah Adasefo Fa Do Dzi Ewuradze Edzidzi No Yɛ Soronko Fi Ɔsom Afofor Dze Ho?
Jesus Wu Ho Nkaadzi